Al-Shabaab oo Toga Suuj ku qafaalatayay dad Shacab ah iyo Ciidamada Puntland oo la sheegay in ay ... - iftineducation.com
Al-Shabaab oo Toga Suuj ku qafaalatayay dad Shacab ah iyo Ciidamada Puntland oo la sheegay in ay …
aadan21 / March 20, 2016
iftineducation.com – Wararka ka imaanaya Toga Suuj ayaa sheegaya in dagaalyahano katirsan Xarakada Al-Shabaab oo halkaasi ku sugan ay qafaasheen dad reer Guuraa ah oo ku sugnaa Toga Suuj ee Gobolka Nugaal.
Dadka ay qafaasheen Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ujeedka ka dambeysa ay tahay in ay gabaad ka dhigtaan, waxaana dadka la afduubtay ku jira haween, caruur iyo waliba dad da’ ah oo reer guuraa ahaa.
Masuuliyiin katirsan Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay heleen xogta dadka ay qafaasheen dagaalyahanada Al-Shabaab, waxaana ayna sheegeen in Ciidamada Puntland ay isku gadaameen halka ay Shabaab dadkaasi ku heestaan.
Qof kasoo baxsaday halka dadkan lagu qafaashay ayaa u sheegay Ciidamada Puntland in ay jiraan dad rayid ah oo gacanta ugu jira dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaa oo ku jira qeybo kamid ah toga Suuj.
Xaalada Deegaanka Suuj ayaa ah mid dagan oo wax dagaalo culus ah aysan ka socon, waxaana wararka sheegayaan in wali dagalayahano katirsan Al-Shabaab ay joogaan toga Suuj inkastoo madaxda Puntland ay sheegeen in toga Suuj ay ka saareen Al-Shabaab.
Toga Suuj oo ah goob ay ku yaalaan Godad iyo buuro ayaa waxaa ku yaala ceelal biyood, waana goob dagaalka ku fiican ayna adag tahay in laga adkaado kooxdii halkaasi gasha hadii ay heesato saanad milatari iyo sahay kale.
Dowlado kala wata Musharxiinta u tartamaya Madaxtinimada Soomaaliya (Yaa kamid ah Dowldahaasi)
Maxaa kasoo kordhay dagaalkii xooganaa ee u dhaxeeyay Ciidamada Puntland iyo Al Shabaab